Mike Jones Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Mike Jones
Mike Jones waa arday ka qalin jabiyay Jaamacadda Boston, oo uu ku qaatay shahaadada MS ee isgaarsiinta bulshada. Haddana waa qoraa waqti-buuxa ah, oo aad u jecel wax kasta oo la xiriira ganacsiga iyo tikniyoolajiyadda.
Sabti, Agoosto 27, 2016 Sabti, Agoosto 27, 2016 Mike Jones
Baadhitaannada macaamiishu waxay fikrad kaa siin karaan cidda ay yihiin macaamiishaadu. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad la qabsato, oo aad hagaajiso muuqaalkaaga astaanta ah, waxayna sidoo kale kaa caawin kartaa inaad sameyso saadaalin ku saabsan mustaqbalkooda waxay doonayaan iyo baahiyahooda. Sameynta sahaminta inta badan ee aad kari karto waa hab wanaagsan oo aad uga sii hor mari karto qalooca markay tahay isbeddellada iyo dookha macaamiishaada. Sahamintu sidoo kale waxay kor u qaadi kartaa kalsoonida macaamiishaada, iyo ugu dambeyntiina, daacadnimada, maadaama ay muujineyso